ပြည်တွင်းမှာ ဝယ်ယူနိုင်တော့မယ့် စိန်ပွင့်စတိုင် ကျောဘက် ကင်မရာ ၄ လုံးနဲ့ Vivo S1 Pro – DigitalTimes
ပြည်တွင်းမှာ ဝယ်ယူနိုင်တော့မယ့် စိန်ပွင့်စတိုင် ကျောဘက် ကင်မရာ ၄ လုံးနဲ့ Vivo S1 Pro
FEATURES Mobiles & Tablets
နှစ်သစ်မှာ ဖုန်းအသစ်နဲ့ စတိုင်လ်ထုတ်ချင်သူတွေအတွက် စိန်ပွင့်ပုံစံ ကျောဘက် ကင်မရာ၄ လုံးနဲ့ Vivo S1 Pro
စိန်ပွင့်ပုံစံ Diamond-shaped ကျောဘက်ကင်မရာ ၄ လုံးနဲ့ Vivo S1 Pro စမတ်ဖုန်းကို ပြည်တွင်းစျေးကွက်မှာ မကြာခင် ရောင်းချသွားတော့မယ်လို့ သိရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာလကမှ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာ စတင် မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ အသစ်စက်စက် မော်ဒယ်ပါ။ အများနဲ့မတူ ဆန်းသစ်တဲ့ ကျောဘက်ကင်မရာဒီဇိုင်း၊ လှပသစ်လွင်တဲ့ အရောင်စုံ၊ အရည်အသွေးမြင့် Super AMOLED Display တွေ ပါဝင်တဲ့ အမိုက်စား Mid-range ဖုန်းတလုံးဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ နှစ်သစ်မှာ စမတ်ဖုန်းအသစ်လေးနဲ့ စတိုင်ကျချင်သူတွေ သေချာပေါက် အကြိုက်တွေ့မှာပါ။
မြင်မြင်ချင်း ကြွေသွားမယ့် ဒီဇိုင်း
လေးထောင့် ဒါမှမဟုတ် စက်ဝိုင်းပုံစံ ကျောကင်မရာဒီဇိုင်းနဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေကို ရိုးအီနေပြီလား? ဘယ်သူနဲ့မှ မတူ ဆန်းသစ်တဲ့ ဖုန်းမျိုးကိုမှ ကိုင်ချင်ပါသလား? ဒါဆိုရင်တော့ Vivo S1 Pro ရှိပါတယ်။
အဖိုးထိုက် လက်ဝတ်ရတနာတွေရဲ့ လက်ရာမြောက်ဒီဇိုင်းကို မှီငြမ်းပုံဖော်ထားတဲ့ စိန်ပွင့်ပုံစံ ကျောကင်မရာဒီဇိုင်းက မြင်သူတိုင်း ငေးမောချင်စရာပါ။ သူငယ်ချင်း၊ မိတ်ဆွေတွေကြားထဲမှာလည်း ကိုယ့်ဖုန်းက ကွဲထွက် လှပနေမှာ အသေအချာပါပဲ။ Vivo S1Pro ပုံစံဒီဇိုင်းက လှပဆန်းသစ်ရုံမက Mystic Black (အနက်) နဲ့ Dreamy White (အဖြူ) အရောင်ပြေး ကာလာ ၂ မျိုးနဲ့ ထွက်ရှိလာမှာဖြစ်လို့ သင့်ရဲ့ ဘယ်လို စတိုင်လ်မျိုးနဲ့မဆို လိုက်ဖက်မှု ရှိနေမှာ အမှန်ပါပဲ။
ကြီးမားကောင်းမွန်တဲ့ အရည်အသွေးမြင့် Full HD Super AMOLED Display
AMOLED Display တွေ ဘယ်လောက်ကောင်းလဲဆိုတာ ပြောဖို့လိုမယ် မထင်ပါဘူး။ AMOLED တခါ သုံးဖူးရင် တသက်လုံး ကျန်တာတွေ မသုံးချင်တော့လောက်အောင် ကောင်းပါတယ်။ အနက်ရောင်ဆို တကယ့် အနက် အစစ်အမှန်ကို ပြပေးနိုင်တာကြောင့် ဓာတ်ပုံတွေ ဗီဒီယိုတွေကို အကောင်းဆုံး ခံစားကြည့်ရှုနိုင်မှာပါ။
အခုခေတ်မှာ လူအများစုက ဖုန်းနဲ့ပဲ YouTube ကြည့်၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖြစ်ကြတာများတော့ Display ကောင်းကောင်းပါတဲ့ ဖုန်းကို ရွေးချယ်ဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။
ဒီအတွက် Vivo S1 Pro မှာ ၆.၃၈ လက်မအထိ ရှိတဲ့ ကြီးမားကျယ်ပြန်တဲ့ Super AMOLED Display ကို ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ ဘေးဘောင်ရယ်လို့ မရှိဘဲ ရှေ့မျက်နှာပြင်မှာ ရေစက်ပုံစံ Notch အသေးလေးတခုပဲ ပါဝင်တာကြောင့် မြင်မြင်သမျှ လုံးဝ Immersive ဖြစ်နေမှာပါ။ စခရင်နဲ့ ကိုယ်ထည်အချိုးအစား ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရှိတယ်လို့ Vivo က ဆိုထားပါတယ်။
AMOLED Display ရဲ့ နောက်ထပ်ကောင်းကျိုးတခုကတော့ မျက်နှာပြင်အောက်လက်ဗွေရာဆန်ဆာ (In-Dispaly Fingerprint Scanner) ထည့်သွင်းနိုင်တာပါ။ Vivo S1 Pro မှာ လက်ဗွေရာ Icon ဒီဇိုင်းကိုလည်း ကျောကင်မရာနဲ့ လိုက်ဖက်အောင် စိန်ပွင့်ပုံစံလေး လုပ်ပေးထားတာကလည်း အသေးအဖွဲကအစ ဂရုစိုက်တတ်ကြောင်း ပြသထားသလိုပါပဲ။ လက်ဗွေပွင့်သွားတဲ့ Animation ကအစ ဆန်းသစ်အောင် Update လုပ်ပေးထားပါသေးတယ်။
Diamond-shaped 48MP AI Quad Camera
S1 Pro မှာ ကျောကင်မရာလေးလုံးကို စိန်ပွင့်ပုံစံ အစိတ်အပိုင်းထဲမှာ အချိုးအစား ကျနလှပစွာ ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ ကျောကင်မရာလေးလုံးမှာ Main Camera က အရည်အသွေးမြင့် 48MP ဆန်ဆာ ဖြစ်ပြီး၊ ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ ပုံရိပ်တွေကို ပေးစွမ်းနိုင်မှာပါ။ ဒါ့အပြင် မြင်ကွင်းကျယ်ရိုက်ဖို့ Wide-angle ကင်မရာတလုံး၊ အနီးကပ်ရိုက်ချက်တွေအတွက် Macro တလုံးနဲ့ Bokheh Effect တွေအတွက် Depth Camera တလုံးတို့လည်း ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။
Object တွေကို အနီးကပ်ရိုက်မလား၊ Group Photo တွေမှာ တယောက်မှ မကျန်ရအောင် ရိုက်မလား၊ ညဘက် အလင်းရောင်နည်းတဲ့အချိန်တွေမှာ ရိုက်မလား အခြေအနေအမျိုးမျိုးမှာ အကောင်းဆုံးပုံထွက်ကို ပေးစွမ်းနိုင်မှာပါ။ ဒါကိုမှ ပိုကောင်းစေဖို့ AI အယ်ဂရစ်သမ်တွေလည်း ထည့်ပေးထားပါသေးတယ်။ ဖုန်းနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ရတာ ဝါသနာပါသူတွေ အကြိုက်တွေ့မယ့် ဖုန်းတလုံးပါ။
ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ Selfie ပုံတွေ ရိုက်ကူးနိုင်ဖို့အတွက် 32MP ရှေ့ကင်မရာတလုံးကို ရှေ့မျက်နှာပြင် Notch အတွင်းမှာ ထည့်ပေးထားပါတယ်။ Selfie ရိုက်ရင် Pos မပေးတတ်သူတွေအတွက် အလှဆုံး Pose ကို အကြံပြုပေးနိုင်တဲ့ AI လုပ်ဆောင်ချက်တွေလည်း ပါတော့ ဘာလိုသေးလဲပေါ့။
အခုခေတ်မှာ Mobile Application တွေ ပိုကောင်း၊ ပိုမြင့်လာတာကြောင့် ဂိမ်းဆော့သည်ဖြစ်စေ၊ မဆော့သည်ဖြစ်စေ စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတဲ့ ဖုန်းတလုံး ပိုင်ဆိုင်ဖို့က တော်တော်လေး အရေးကြီးလာပါတယ်။ ဒီအတွက် S1 Pro မှာ Qualcomm ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Octa-core Snapdragon 665 SoC ကို ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ ဒါကိုမှ 8GB RAM နဲ့ အမြင့်ဆုံး 256GB Storage နဲ့ တွဲဖက်ပေးထားတော့ ဖုန်းရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်က အမြဲတမ်း သွက်လက်ပေါ့ပါးနေမှာပါ။ ဓာတ်ပုံ၊ ဗီဒီယိုတွေ အများကြီး သိမ်းထားချင်သူတွေအတွက်လည်း Storage က လုံလောက်တဲ့အဆင့်ထက်ကို ပိုပါသေးတယ်။
မျက်နှာပြင်ကြီးတာကြောင့် ဘက်ထရီကြာကြာခံစေဖို့အတွက် S1 Pro မှာ ကြီးမားတဲ့ 4,500mAh ဘက်ထရီကို ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ ပြီးတော့ Type-C Port ကနေ 18W Fast Charging စနစ်နဲ့ အမြန်အားသွင်းနိုင်သေးတော့ ဘက်ထရီကုန်တယ်ဆိုတာ ဘာလဲ မေးယူရမှာပါ။ FM Radio ၊ Bluetooth 5.0 ၊ GPS ၊ 3.,5mm Headphone Jack စသဖြင့် အခြေခံ Communications စနစ်တွေလည်း အကုန် ပါဝင်ပါတယ်။ ဖုန်းဝယ်ရင် Protective Film တခါတည်း ကပ်ပေးလိုက်တဲ့အပြင် ဘူးထဲမှာ နားကြပ်ကနေ Case အထိ အစုံထည့်ပေးတတ်တာကလည်း Vivo ရဲ့ အလေ့အထကောင်းတခုပါ။
Vivo Myanmar ဘက်ကတော့ S1 Pro ရဲ့ စျေးနှုန်းကို တရားဝင် မကြေညာရသေးပါဘူး။ ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက်နေ့မှ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တရားဝင် မိတ်ဆက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဖုန်းကို တရုတ်နိုင်ငံမှာတော့ Vivo Y9s အမည်နဲ့ ရောင်းချပေးနေပါတယ်။ စျေးနှုန်းက ၂,၀၀၀ ယွမ် ဝန်းကျင်ဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း လေးသိန်းခွဲနီးပါးလောက် ရှိမယ်လို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။ စျေးနှုန်း တရားဝင် သိရတဲ့အခါ ထပ်မံကြေညာပေးသွားပါမယ်။
Huawei Nova6SE ကို တရုတ်မှာ ရောင်းပြီ
OnePlus 8 နဲ့ 8 Pro ရဲ့ Specs တွေ ပေါက်ကြားထွက်ပေါ်လာ